I-5 yeYoga yokuzivocavoca kunye ne-Yoga ngokuchasene nentombazana eqinileyo
Imithambo emi-5 yeyoga ngokuchasene neStiff Neck
08 / 08 / 2016 /0 Amazwana/i Amanqaku mfanelo, Ukuzivocavoca kunye nokuzivocavoca/av ubuhlungu
I-5 yeYoga yokuzivocavoca ngokuchasene nentambo eqinileyo
Ngaba ukhathazwa yintamo elukhuni? Nazi iindlela ezi-5 zokuzivocavoca zeYoga ezinokukunceda ngokunyuka kokuhamba entanyeni kunye nokunciphisa ukuqina kwentamo. Zive ukhululekile ukuba wabelane nomntu ngezikhalazo zentamo.
Ukuzivocavoca nge-yoga kunye ne-yoga kunokuba luncedo xa kufikwa ekuphumuleni kwezihlunu eziqinileyo kunye nezihlunu. Uninzi lwethu luhlala kakhulu kubomi bemihla ngemihla kwaye oku kubangela ukuba izihlunu zisentanyeni, umva, iinciniba, ngasemva kwamathanga nesihlalo ukuba zixineke kakhulu. Ukolula rhoqo kunye nokuhamba kunokuba ngumlinganiso olungileyo wokuchasana nemisipha elukhuni kunye nokudibana okuqinileyo. Sicebisa ukuba le misebenzi yenziwe kunye ezi zixhobo zokuqina og iphambi Iziphumo eziphezulu-kunye nezi Uhlengahlengiso lwezinto eziluqilima ukuze ziqinise intamo.
1. Urdhvamukhasvanasana (Ukujonga indawo yenja)
Isikhundla seyoga sivula isifuba, solule izihlunu zesisu kwaye sisebenzise umqolo ngendlela elungileyo. Qala ngokulala phantsi phantsi kunye neentende zakho phantsi phantsi malunga neembambo. Emva koko tsala imilenze yakho kunye ucinezele umphezulu weenyawo zakho ucinezelelwe phantsi - ngaxeshanye sebenzisa amandla asemqolo, hayi izandla zakho, ukuphakamisa isifuba sakho phantsi - kuya kufuneka uzive ukuba usolula kancinci ngasemva- qiniseka ukuba awuthathi kakhulu . Gcina imilenze yakho ithe tye kwaye ubambe indawo yesi-5 ukuya kweli-10 yokuphefumla okunzulu. Phinda amaxesha amaninzi kangangoko ucinga ukuba kuyimfuneko.
2. Uttana Shishosana (isikhundla seYoga wolula umqolo wonke)
Isikhundla seyoga esolula umqolo wonke ukusuka kwinqanaba elisezantsi yonke indlela ukuya kutshintsho kwintamo yemisipha esaziyo sonke kunokuba nzima ukuyolula ngendlela elungileyo. Isolula kwaye inika ubhetyebhetye ngakumbi kokubini ngezantsi nangaphezulu. Yima emadolweni uyeke umzimba wakho uwele phambili ngeengalo ezoluliweyo njengoko kubonisiwe emfanekisweni - qiniseka ukuba uyakwenza oku ngokunyakaza okuzolileyo, okuzolileyo. Fumana isikhundla apho solula ngokulula kwaye ubambe imizuzwana engama-30 ngaphambi kokuphinda ngaphezulu kweeseti ezi-3-4.
4. U-Ardha Matsyendrasana (Ukuzivocavoca ngokujikeleza)
Indawo yokuhlala yeyoga ibonelela ngokwanda kokuguquguquka kunye nentshukumo yomqolo kunye nezihlunu zangasemva- nayo icetyiswa ngokubanzi kumqolo wonke. Inokuba ngumthambo onzima, ke sukuzama oku ukuba awuziva ukhululekile ngolunye uqeqesho kweli nqaku. Thatha umoya omninzi kwaye ujike ngokuzolileyo uye ecaleni - musa ukujija, kodwa hamba ngokuzolileyo uye ecaleni. Bamba indawo yokuphefumla okunzulu okungu-7-8 uze uphinde kwelinye icala.
5. UViparita Karani (Imilenze yolulwe eludongeni)
I-Viparita Karani sisimo se-yoga esinika umzimba ukuphumla okufaneleyo ngelixa ususa uxinzelelo entanyeni nasemva. Xa usenza lo msebenzi, sebenzisa ikiti yeyoga kunye netawuli ukuze wandise uzinzo lwehip. Uzifumanele ngokwakho ukuba bungakanani na ukulula okulungele wena - ukuvavanya umgama oya eludongeni kunye ne angle yemilenze. Zama ukugcina imilenze yakho ithe tye njengoko uvumela amagxa akho kunye nentamo ukuba ibuyele kumgangatho. Bamba intamo yakho ngomva kwaye iingalo zakho ziwe emva zixhase izandla zakho. Bamba esi sikhundla kangangemizuzu emi-5 ukuya kweli-10 ngelixa uphefumla ngokuzolileyo kwaye ulawula.
Ingcebiso: I-roller ye-foam yokuhamba ngakumbi kwesifuba
I-roller yamagwebu inokuba sisixhobo esiluncedo kunye nesilungileyo sokudibanisa amalungu kunye nezihlunu kumqolo we-thoracic - ethi yona ikhuthaze intshukumo engcono iye entanyeni eqaqambileyo ebuhlungu. Ingcebiso elungileyo kuwe ekufuneka "unyibilike" kancinci. Iziphumo eziphezulu sicebisa lo ugwebayo amagwebu (Cofa apha - uvula iwindow entsha) kwi-Epitomy.
Konke kuxhomekeke kuwe. Fumanisa ukuba yeyiphi esebenzayo kuwe ekuqaleni kwaye wakhe kancinci kodwa ngokuqinisekileyo uye phambili. Khumbula ukuba ukuzilolonga kungakhokelela ekuthambekeni kwasekuqaleni, njengoko ngokuthe ngcembe uqhekeza iindawo ezonakeleyo (izicwili ezonakeleyo kunye nezicwili ezibomvu) kwaye ubeke endaweni yazo izicwili ezithambileyo ezisempilweni. Oku kunokuba yinkqubo echitha ixesha kodwa inomvuzo kakhulu. Ukuba unesifo, sicela ukuba ubuze ugqirha wakho ukuba ngaba le mithambo ingaba luncedo kuwe- unokuzama ngononophelo olukhulu. Ngaphandle koko sikukhuthaza ukuba uhambe kwaye uhambe uhambo olumqengqelezi ukuba kunokwenzeka. Siyakukhuthaza ukuba ujonge ezi zixhobo zokuzivocavoca ezinqeni.
Zive ukhululekile ukuba wabelane ngezi zinto kunye noogxa, izihlobo kunye nabaqhelileyo. Ukuba ungathanda ukuzivocavoca okuthunyelwe njengoxwebhu olunokuphindwaphindwa nokunye okunjalo, siyakucela ezifana kwaye uqhagamshelane ngeFacebook iphepha apha. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, zinike nje Nxibelelana nathi okanye uphawule ngokuthe ngqo kwelinye lamanqaku afanelekileyo kumcimbi wakho.
IPHEPHA ELANDELAYO: - Ubuhlungu entanyeni? Kuya kufuneka uyazi oku!
KHAWUZame: - 5 Ukuzivocavoca okuhle kumaGxa amabi
KHAWUZAME ELI NGXENYE UXANDUVA: -Imithambo emi-5 elungileyo yokulwa iSciatica
Ndingenza ntoni kwizihlunu kunye nentlungu edibeneyo?
Iimveliso ezinconyelweyo zokuphucula iintlungu zezihlunu kunye nentlungu edibeneyo
OKUFUNDILEYO FUNDA: -Izixhobo ezi-6 eziQinisekayo zoKomelela eziNtlungu
UBUSAZI: -Inyango ebandayo inokunika isiqabu seentlungu kumalungu aqaqanjelwa nezihlunu? Phakathi kwezinye izinto, I-Biofreeze (ungay-odola apha), equlathe ikakhulu iimveliso zendalo, yimveliso ethandwayo. Nxibelelana nathi namhlanje kwiphepha lethu le-Facebook ukuba ufuna ezinye iingcebiso ezilungiselelwe wena.
INQAKU LESIBINI: -Unyango lwe-Alzheimer olutsha lubuyisela inkumbulo egcweleyo!
OKUFUNDILEYO FUNDA: -Iglasi yotywala okanye iwayini yamathambo omeleleyo? Ewe Nceda!
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Yogaøvelser-for-stiv-nakke.jpg?media=1648573622 500 1000 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2016-08-08 20:44:082022-03-18 17:27:07Imithambo emi-5 yeyoga ngokuchasene neStiff Neck
Unyango lwe-Heartburn eqhelekileyo lunokubangela ukonzakala okukhulu kwezintso! Ukufundwa kwencwadi yongeza uBomi!